UK inomira kushandisa marasha kugadzira magetsi makore 135 gare gare | Green Renewables
UK inomira kushandisa marasha kugadzira magetsi makore 135 gare gare
Tomàs Bigardà | | Tora co2, Thermal simba, Chaizvoizvo Simba, Renewable simba, Environment
Yakanga iri nyika yekutanga kushandisa marasha kugadzira magetsi, Makore 135 gare gare, ndiyo yekutanga yepasi rose hupfumi mu zviparadzanise (zvishoma nezvishoma asi pasina kumbomira).
NeChishanu chapfuura, kekutanga kekutanga kubva paRevolution Industrial, United Kingdom yakararama zuva rakazara pasina kupisa kilo yemarasha kuti ibudise magetsi. Nekudaro hausi iwo mugumo weiyi fossil simba sosi, iyo inobatsira zvakanyanya kushanduka kwemamiriro ekunze, kunyangwe vazhinji vanoita zvematongerwo enyika vachibvumirana kuipemberera sechiitiko chakakosha.
Zvakaitika pakati pa23.00pm neChina uye 23.00pm neChishanu vhiki rapfuura. Maawa makumi maviri nemana mairi iyo West Burton 1 Power Station, chirimwa chega chinoshanda nemagetsi emarasha, yakamira kupa magetsi kune grid yenyika. Mangwana acho masikati, gasi magasi akapa 47% yemagetsi emunyika; magetsi emagetsi enyukireya nemagetsi emhepo, 18% imwe neimwe; solar panels, 10%, uye 6% zvakabva ku biomass.
Zuva racho harina kuitika netsaona. Vhura primavera, kana mazuva acho ave kureba uye dzimba dzinomira kushandisa kudziisa / kupisa pombi, uye zvakadaro usashandise mhepo inodzora (ndinonzwisisa kuti kuUK haishandiswe zvakafanana frequency kupfuura muAndalusia). Iko kudiwa kwemagetsi kunowanzove kuri kudzikira, pamusoro pezvo, Chishanu anowanzo kuve mazuva evhiki aine mashoma mashandisirwo, uye kuapedza zuva raive mu nguva yezororo Isita (mafekitori mazhinji akavharwa).
Asi haisi chikamu chakazvimiririra (nyanzvi dzinodaro), asi zviri chikamu che mamiriro zvinopfuura pachena. Kwave kwatove nezvimwe zvikamu hapana marasha, kunyangwe ipfupi, mugore rekupedzisira, uye zvese zvinoratidza kuti mazuva senge Chishanu anozodzokororwa nguva dzese nekuwedzera kusununguka.
Gore rakapera, marasha akapa "chete" 9% ye simba rinogadzirwa munyika, zvichienzaniswa ne23% muna 2015 uye 40% muna 2012. Mumakore mashanu apfuura, zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvemagetsi akaiswa munyika ekugadzira magetsi kubva kumarasha zvakabviswa. Zvirongwa zveHurumende ndezvekuvhara iyo yekupedzisira marasha chirimwa muna 2025.
Mumavhiki anotungamira mukugadziriswa kunopesana ne shanduko yemamiriro ekunze Zvita 2015 muParis, Hurumende yeBritain yakazivisa chinangwa chayo kubuda marasha kusvika 2025 (nguva yakatarwa). Makara emarasha anga achivharwa apo simba rezuva nemhepo vanga vachiwanda munyika yose, inotungamirwa nemaprimiyamu akaunzwa neHurumende kuzadzisa zvido zvayo zvekudzora magasi anodziya.
Kwete kunyange iyo chaiyo kushoropodzwa Kuchinja kwaTheresa May pamaonero esimba rinowedzerwazve kwakwanisa kudzora maitiro akaisa United Kingdom se nyika yechitanhatu pasi rose mune akaisirwa kugona kwezuva simba (Ndiani angati).
Muzuva rake, marasha yaive injini yezera remaindasitiri eUnited Kingdom, uko iyo chirimwa chekutanga muLondon muna 1882. Kwaive kutsigirwa kwehupfumi uye hupenyu hwemazana e maguta emigodhi akagoverwa nyika yese uye zvakabatanidzwa kune avo hunhu mhute ye mamiriro ekunze british.
Neraki munguva pfupi ichave iri kune iyo yapfuura muUK, sezvazviri kare munyika dzakaita seSwitzerland, Belgium kana Norway. “Zuva rekutanga musina marasha kuUK kubvira Industrial Revolution inoratidza kutendeuka mu shanduko yesimba”Akadaro Hannah Martin weGreenpeace UK. “Makumi chete apfuura, zuva risina marasha raigona kunge risingafungidzike, uye mumakore gumizve gadziriro yedu yemagetsi ichaita ichave yakanyatso shanduka zvakare".
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Renewable simba » UK inomira kushandisa marasha kugadzira magetsi makore 135 gare gare
Mumatsutso neEaster magetsi mashandisirwo anoderera, ………… uye inowedzera munzvimbo dzekuBritain zororo.
Tomàs Bigardà akadaro
Wese munhu arikuuya kuSpain 😛
Pindura Tomàs Bigordà
Masango manejimendi uye biomass simba seyakagadziriswa zviwanikwa